Drafitra marketing: ny maodely farany hitovy amin'ny pro | Famoronana an-tserasera
Indraindray, na noho ianao mirotsaka amin'ny asan'ny mpandraharaha, na satria miasa ao amin'ny departemantan'ny marketing ianao, dia miatrika ireo drafitra varotra atahorana. Izy ireo dia tatitra izay manampy anao hahafantatra izay ho paikadin'ny orinasa iray. Fa ny fanaovana azy ireo dia mety hampiadana anao. Soa ihany fa manana safidy ianao, toy ny drafitra varotra modely hitanao amin'ny Internet.
Na misafidy ny hanao izany ianao na manao drafitra marketing miaraka amina modely, voalohany indrindra mila mahita hevitra maro ianao hahafantarana hoe iza no mety indrindra amin'ny orinasanao na serivisinao. Azonay omena anao ve?
1 Inona ny drafitra marketing
1.1 Inona no fampahalalana ampidirin'ny drafitra marketing marketing modely
2 Ahoana ny fomba hamoronana drafitra marketing
2.1 Fantaro ny tenanao
2.2 Apetraho ny tanjonao
2.3 Apetraho ny paikady
2.4 Hetsika sy fanadihadiana
3 Fandaharam-potoana hanaovana drafitra marketing miaraka amin'ny modely
3.5 Infografika miaraka amin'ny Photoshop
Inona ny drafitra marketing
Alohan'ny handehananao amin'ny drafitra marketing sy modely dia tokony ho fantatrao izay tianay horesahina. Satria, amin'ity fomba ity, dia ho fantatrao izay tsy maintsy apetrakao ao mba hahomby.
Ny drafitra marketing dia a antontan-taratasy izay mirakitra ny paikady harahina, isan-taona, isan-telovolana na isam-bolana. Izy io dia mametraka ny tondrozotra hahatratrarana ireo tanjona napetraka, mazàna mampitombo ny varotra orinasa, manana mpihaino betsaka kokoa, sns.
Inona no fampahalalana ampidirin'ny drafitra marketing marketing modely
Manokana, ny fampahalalana ho tafiditra ao anaty modely drafitra marketing Toy izao manaraka izao:
Famintinana ireo tanjona napetraka. Mba hahitana raha, aorian'ny maha-marim-pototra an'io drafitra io, dia tanteraka sa tsia.
Famakafakana ny toe-draharaha misy ankehitriny (raha ampitahaina amin'ny an'ny ankehitriny).
Paikady voafaritra ao amin'ny drafitra, izany hoe ny fahalalana izay hatao mba hahatratrarana ireo tanjona ireo.
Metrika hanaraka, hahafantarana raha ny tetika no mety amin'ny fomba kendrena.
Ny drafitra marketing dia, amin'ny pejy vitsivitsy, mahita ny paikady eran-tany harahina amin'ity fitaovana ity. Ary, ho an'ity, amin'ny alàlan'ny Internet dia afaka mahita maodely maro samihafa ianao, ny sasany manana fampahalalana bebe kokoa noho ny hafa.
Ahoana ny fomba hamoronana drafitra marketing
Amin'ny fomba azo ampiharina, izahay dia hanazava ny fomba tokony hanaovana drafitra marketing. Mba hanaovana izany dia mila manaraka andian-dahatsoratra ianao dingana izay hanome anao fampahalalana marobe. Avy eo, tokony ho azonao ilay izy ary asehoo ao anaty antontan-taratasy izay mety ho mihoatra lavitra na latsaka (manomboka amin'ny rakitra an-tsary ka hatramin'ny pejy marobe).
Ireto manaraka ireto ny dingana manaraka:
Na ho an'ny orinasa na ho anao, ary koa ho an'ny besinimaro izay iresahanao. Alao an-tsaina hoe apetrak'izy ireo aminao ity fanontaniana manaraka ity. Iza ianao? o Iza ity orinasa ity? Ilainao fantaro hoe iza ianao ary inona no ataonao satria, raha tsy manome valiny ianao dia midika izany fa tsy fantatrao ny fomba fiasan'ilay orinasa na iza no mety hahaliana anao.
Mandritra izany fotoana izany dia mila fantatrao izay kendrenao, izany hoe iza no manampy anao amin'ny serivisinao na ny orinasanao. Io ilay antsoina hoe mpihaino kendrena, ary tsy maintsy fararanao raha hanaiky ny paikady hahatratrarana ireo olona ireo.
Apetraho ny tanjonao
Ny dingana manaraka, rehefa fantatrao hoe iza ianao ary iza no halehanao, dia ny mahafantatra inona ny tanjona kendrenao. Ireo dia azo atsangana amin'ny fotoana fohy, antonony na maharitra. Ny tolo-kevitr'ireo manam-pahaizana dia ny hametahana maro isanisany, amin'ity fomba ity dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava kokoa ny drafitra marketing (raha mbola mandaitra).
Apetraho ny paikady
Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy apetrakao izay rehetra hatao mahafeno ireo tanjona voalaza etsy ambony ary tsy hamela ny "personalité" an'ny orinasa na serivisy, ary koa ny mpihaino kendrena.
Ohatra, alao sary an-tsaina hoe fivarotam-boky ara-toekarena ianao. Ny mpihaino kendrenao dia ny mpamaky izay miahy ny toekarena, ny mpandraharaha ... Fa zaza ve ny mpihaino anao? Noho izany, ny paikady dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ireo olona miahiahy momba ny toekarena (mihoatra ny 18, lehilahy sy vehivavy, miaraka amin'ny tombony ara-toekarena (na noho ny toekareny manokana na orinasa) ...).
Hetsika sy fanadihadiana
Farany, azonao atao ny mampifandray ny vanim-potoana hiasan'ity drafi-barotra ity ary hamakafaka raha toa ka mandaitra. Raha sanatria tsy izany dia tsy maintsy namboarina mba hanovana izay tsy mandeha ary manandrana zavatra hafa.
Fandaharam-potoana hanaovana drafitra marketing miaraka amin'ny modely
Manaraka izany, holazainay aminao ny sasany programa izay hanaovana drafitra marketing miaraka amin'ny modely. Noho izany, na manao ny drafitra isam-bolana, isan-telovolana na isan-taona ianao, dia afaka miorim-paka foana amin'ny modely izay nataonao voalohany.
Anisan'ireo programa amporisihinay ny:
Tsy programa “maimaimpoana” io, satria mila misoratra anarana ianao ary azo antoka fa handoa ny fampiasana azy, saingy manolotra anao ireo maodely fototra sy ny mety hamoronana anao manokana. Ankoatr'izay dia mifantoka amin'ny lohahevitra matihanina izy ireo ka ho tsara sy matotra ny valiny.
Mazava fa tsy maintsy i Canva. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana ankafizin'ny mpamorona maro, ary koa ho an'ireo mila manao drafitra marketing miaraka amina modely dia mety izany.
Voalohany, satria maimaim-poana. Ary faharoa, satria io dia iray izay hahitanao loharano fanampiny. Izy io dia manana modely ahafahanao mahazo hevitra momba ny mety ho endrik'ilay drafitra ara-barotra, fa azonao atao ny mamorona azy avy hatrany. Azonao atao koa ny manamboatra ny môdely mba hampidirana ny logo, sarin'ny orinasa, sns. hahatonga azy manokana.
Who says Word, dia miresaka momba ny karazany hafa koa, toa ny OpenOffice na LibreOffice (izay mitovy nefa maimaim-poana). Matetika ity programa ity ny mahazatra hanatanterahana drafitra marketing ary raha ny marina dia maro amin'ireo modely hitanao amin'ny Internet no natao toy izao.
Manana tombony ianao amin'ny fanitsiana azy ireo hampidirina ao ny fampahalalana ilainao ary manohana sary, sary, fomba, latabatra ... Mahaliana tokoa ny fampiasana azy io.
Avy amin'ny suite an'ny Office, ny PowerPoint dia fomba iray hafa hanaovana ny drafitry ny varotrao amin'ny modely. Tsy dia be mpampiasa toy ny teo aloha izy io, fa manolotra endri-javatra hafa iray izay mampiavaka azy (hanolotra ny vaovao ho tsipika).
Infografika miaraka amin'ny Photoshop
Na amin'ny programa fanovana sary. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny misafidy ny hanao infographic na famintinana ny drafi-barotra miaraka amin'ny sary sy sary hita maso izay manampy amin'ny fakana ny votoatiny.
Ary azonao atao izany samy miaraka amin'ny Photoshop na programa fanovana sary hafa, toy ny amin'ny Internet (ohatra miaraka amin'i Canva).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Drafitra ara-barotra: ny maodely farany hitovy amin'ny pro